केन्द्रीय सदस्य « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
Tag: केन्द्रीय सदस्य
केन्द्रीय सदस्यलाई देउवाको चुनौती- ‘गठबन्धनको विरोध गर्नेले एक्लै चुनाव जितेर देखाउनू’
नेताहरूको धारणापछि देउवाले आफूले देशभरिको अवस्थाका बारेमा जानकारी पाइरहेको भन्दै गठबन्धनको विरोध गर्दा आगामी दिनमा समस्या पर्ने र जितेर देखाउनुपर्ने चुनौति भएकाले सम्हालिएर बोल्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
उहाँसँगै राजविराजका उद्योगपति समाजसेवी अरूण प्रधानलगायत नेता तथा कार्यकर्ताहरू एमाले पार्टी परित्याग गरी जसपा नेपालमा प्रवेश गरेका हुन् ।
देउवाद्वारा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा यी १० नेता मनोनित
मनोनित हुनेमा विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. प्रकाशशरण महत, डा. नारायण खड्का, सुजाता कोइराला, उमा रेग्मी र मीनबहादुर विश्वकर्मा रहेका छन् ।
कांग्रेसका निर्वाचित पदाधिकारीलाई प्रमाणपत्र वितरण
नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ ।
कांग्रेस खसआर्य केन्द्रीय सदस्यको ४१ सय मत गन्दा कसको मत कति ?
खसआर्यको मतगणना सकिएसँगै आगामी ४ वर्षका लागि नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारीसहित १ सय ३४ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित भएको छ ।
चितवनबाट पहिलाे पटक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित, विरासत फर्काउने कोइरालाको प्रतिवद्धता
केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएपछि भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै नेता कोइरालाले चितवनमा व्यक्ति विशेषलाई फाइदा हुनेगरी गठबन्धन हुन नदिने प्रष्ट पार्नुभएको छ ।
कांग्रेस खुला महिलातर्फ देउवापत्नीसहित ९ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित, कसले कति मत पाए ?
अन्तिम मतपरिणामअनुसार डीला संग्रौला २८ सय ८५ मत ल्याएर पहिलो नम्बरमा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनुभएको छ ।